Taylor Swift - Fiiri Sidaad ii Qabtay - VipCasting.cz
Taylor Swift - Fiiri waxaad adigu samaysay
Do, fiiri, Made, Me, Taylor Swift, Waa maxay, Waxaad
Taylor Alison Swift (* 13. Diseembar 1989) waaAmericanheesaha, heesaha heesaha iyo muusigga. Waxay ku soo korayWyomissing v Pennsylvaniaoo markay afar iyo toban wado,Nashville v Tennessee, halkaas oo ay bilawday mihnadeeda muusikada oo ah fanaan caan ah. Waxay qandaraas la saxiixatay guri madax banaanDiiwaanka Big Machineoo wuxuu noqday qoraaga ugu da 'yar abid abid abid loogu yeero guriga daabacaaddaSony / ATV Music Publishing. Horeba markii uu sii daayay markii ugu horreysayalbum qarsoodi ah (Taylor Swift) ee 2006 ayaa noqday xiddig ka mid ah muusiga dalka. Midka saddexaad "Our song"Waxay ka dhigtay fanaankii ugu da'da yaraa ee qoray oo aan wax caawimo ah oo sii daayay heeso ku taal kaalinta koowaad ee BillboardGabdho Soomaliyeed. Waxay heshay magacaabidAbaalmarinta GrammyqaybtaFarshaxanka ugu Fiican(Artist Best Actor) sanadka2008.
Albaabka labaadcabsi la'aanla sii daayay dhamaadkii sanadka 2008. Ku soo laabtay guusha ay gaarsiiyeen guurtida "Sheeko jacayl"Iyo"Adigu waad i tihiin"Jaantusyada ayaa ku dhuftay albaabkapop crossoverdhagaystayaasha oo waxay noqdeen albaabka ugu wanaagsan ee sanadka ee 2009. Albaabka ayaa ku guuleystay afar Grammy Awardsee 2010, ayaa ugu mahad celinaysa Swift inuu noqdo guushii ugu yareyd ee Grammy ee ku magacawda "Album of the Year". Sheekadooda saddexaadHadda hadalayaa la sii daayay dhamaadkii 2010 waxayna iibisay in ka badan hal malyuun oo cutub todobaadkii hore. Swift ayaa markaa kadib tagtay safar saddex bilood ahHadal hadda Socodka Aduunka, halkaas oo ay ku qabatay garoomo dhowr ah waxayna soo jiidatay malaayiin taageerayaal ah iyada oo loo marayo 1,6. Saddexaad oo ka mid ah albumka "Cuntada"Laba labo oo Grammy ah. Afka afraad ee Taylor Swift ayaa loo yaqaanRedwaxaana la soo saaray 22. Oktoobar 2012. Pilot hal "Waligeennaba weligay ma wadaageyno"Waxay noqoneysaa markii ugu horreysay ee ay gaarto heerka sare ee saldhiggaboorHot 100. Dalxiis Waqooyi AmerikaRed Tourwaxaa la bilaabay March ee 2013. Taylor's ugu dambeeyay 1989 ayaa la sii daayay dhamaadkii 2014 iyo heesaha ugu guulaha badan ee albumku noqdayRux Muuji. Waxay sidoo kale ku guuleysatay Grammy ee "Album of the Year" iyo qaybaha "Vocal Best".
Taylor Swift waxaa inta badan lagu sharraxaa "daroogada America" ​​waxaana lagu yaqaanaa heeso ay inta badan ku heesato jacaylka. Musikada, inta badan waxa ay ku saabsan tahay heeso leh sheekooyin fudud iyo jilbiyada, taas oo si dhakhso ah ugu dhejisey miyir-qabka (oo loo yaqaan "Hook) Sida heesaha sheekada, waxaa la siiyay ururUrurka Nashville Songwriters Associationiyo ururadaDhowna Hall of Fame. Inta u dhaxaysaguulaha kale ee Taylor SwiftTobankii abaalmarinta Grammy Awards, FifteenAbaalmarinta Muusikada Mareykanka, toddobaAbaalmarinta Dalxiiska ee Dalka, lixAbaalmarinta Abaalmarinta Muusikada Dalkaiyo saddex iyo tobanAbaalmarinta BMI. Intii uu socday xirfaddeeda, waxay kumanaan xayeysiin ah ka iibisay 22, malaayiin heeso ayaa laga soo daayey online via 50. Taylor Swift wuxuu sidoo kale isku dayay inuu u dhaqmo sida actress, isagoo ka muuqday hal dhacdo ee Dambiyada Las Vegas ee 2009,Na sv. Maalinta Jacaylka(2010) iyo filim faaruq ahLorax The(2012).Forbeswaxay ku qiyaaseysaa inay malaayiin doolar ku kasbatay xirfadeeda iyada oo loo marayo 165. Sanadkiiba2013waxay ku kasbatay 40 Million Dollar (ku dhowaad 789 million crowns), taas oo inta badan ka mid ah dadka ku jiray ganacsiga muusikada.
Taylor Swift waxay taageertaa waxbarashada farshaxanka, akhris-qoraalka carruurta, waxay gacan ka geysataa gargaarka masiibooyinka dabiiciga ah, waxay kor u qaadeysaa xuquuqdaLGBTiyo sadaqada carruurta jiran.